Home Wararka Maxkamadda Ciidanka Puntland oo xukuntay shabakad ka tirsan Al-shabaab.
Maxkamadda Ciidanka Puntland oo xukuntay shabakad ka tirsan Al-shabaab.
Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee dowladda Puntland, ayaa xukuntay shabakad ku eedaysan in ay ka tirsan yihiin Al-shabaab.
Shabakadda oo ka kooban lix xubnood, ayaa afar kamida lagu xukumay dil toogasho ah, halka labada kalena lagu riday xabsiyo kala duwan. Farxaan Faysal Salaad, Cabdullaahi Faysal Xuseen, Barkhad Cawil Xirsi iyo Liibaan Aaden Muuse ayaa Maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah.
Sidoo kale, Cabdiqani Farxaan Cabdullaahi ayaa Maxkamaddu ku xukuntay 30 sano, halka Cabdiraxmaan Cawil Maxamed ay ku xukuntay 20 sano oo xabsiya. Maxkamadda ayaa sheegtay in shabakaddaas ay qaraxyo iyo dilala qorshaysan ka fulin jirtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta Gobolka Mudug.
Next articleGuddiga Doorashada heer Federaal oo amaanay boobkii shalay ka dhacay Jowhar
X. Shire “Shirka Garowe waxa uu Puntland ka qaaday culeyskii sicir-bararka,...